Shiinaha Suunka gadaal ee warshad bacda barafka iyo soo saarayaasha | Huanyi
Dhaawaca jilibka hoose ee xanuun joojinta neoprene-ka aan biyuhu ku habboonayn oo leh dhammaan cabbirka baakad caafimaad oo dhan
QORSHAHA AAN LACAG-LA'AAN AH, DHAQANKA CARRUURTA CARRUURTA KU HAYO DHAMMAAN, TACSI DEG DEG AH
Bacda barafka waxaa laga sameeyaa biyo aan nadiif aheyn, maro jilicsan oo jilicsan, dabool ka sii daadin kara dabool leh fur furan si loogu ogolaado in si fudud loo buuxiyo xabadaha barafka ama barafka la jajabiyey, iyo naqshadeynta dharka jilicsan ayaa u saamaxaya boorsada barafka inay isku wareejiso meel kasta oo jirka ka mid ah.
Dhamaanteen waxaan la xanuunsaneynaa raaxo ama dhaawacyo mararka qaar nolosheena, murqaha oo xanuuna, kalagoysyada oo xanuun ama dhaawacyo ah. In kasta oo aanan ka hortagi karin dhammaantood, waxaan kaa caawin karnaa inaad soo kabsato si aad u hesho dabacsanaan badan iyo xanuun yar maalintaada oo dhan. Duubabka daaweynta ee dejiya waxay la yimaadaan xarig la isku hagaajin karo, hal-cabir-dhan ah oo u fiican ragga iyo dumarka.
Duubka neoprene iyo 2da xarig ee laastikada ah ayaa kaa caawinaya inaad bacda barafka si sahal ah ugu hayso, waad u isticmaali kartaa meel kasta oo aad ku sameyn kartaa waxyaabo kale inta aad kuleylka kuleylka ama cadaadin qabow.
Waxaa jira dalool duubka ah si uu barafka ugu hayo booska, waxaad ku duudduubi kartaa dhabarkaaga hoose, garabka, anqawga, jilibka oo ay kujiraan suumanka laastikada iyo jillaab adag & loop si aad ugu xirxirto duubka barafka si aad ugu isticmaasho meel kasta.
Xanuun Xanuun & Daaweyn: Codso isla markiiba dhaawaca ka dib si aad u xakameyso bararka iyo caabuqa unugyada jilicsan. Waxay bixisaa xannuun deg-deg ah, daaweyn muddo-dheer ah waxayna gacan ka geysataa sidii loo maareyn lahaa murqaha iyo bararka bacaha. gel gel pack waa xirmada qabow ee ugu badan dhaawacyada caadiga ah waxayna waxtar u leedahay meelo badan, oo ay ka mid yihiin: guryaha, xafiisyada, isboortiga, goobaha shaqada iyo iskuulada.
Hore: Xidhmada Barafka Kadib
Xirmada barafka gadaal
Xidhmada Qabow ee Qabow
Baakad Kulul oo qabow
Baraf Xidhan Dhabarka Madax xanuunka
Baakad baraf ah oo ku taal Dhabarka Qoorta
Baakadaha barafka ee dhabarka iyo qoorta
Dambiisha Barafka dib loo isticmaali karo ee loogu talagalay Daaweynta Jirka
bacda barafka ee dib loo isticmaali karo